Akụkọ - Ngosipụta ọgba tum tum Chongqing na 2021, ewepụtara oge!
Ngosipụta ọgba tum tum Chongqing na 2021, ewepụtara oge!
A ga -eme emume iri na itoolu China International Motorcycle Expo (Chongqing Motorcycle Expo), ihe omume kwa afọ nke ụlọ ọrụ ọgba tum tum na China na ọbụna ụwa na 2021, na Chongqing International Expo Center site na Septemba 17 ruo 20, 2021.
Tọrọ ntọala na 2002, China International Motorcycle Expo bụ ihe omume kwa afọ maka ụlọ ọrụ ọgba tum tum na China na ọbụna ụwa, na -eduga nduzi mmepe nke ụlọ ọrụ ọgba tum tum China.
Ahịa ọgba tum tum ndị China abụrụla ụzọ dị mkpa maka ụdị ọgba tum tum mba ụwa.Elektrik, netwọkụ, nwere ọgụgụ isi ghọrọ usoro mmepe, teknụzụ ọhụrụ nke E-moto ga-egosi ụlọ ọrụ moto ga-abanye mpaghara ọhụrụ.
Ngosipụta ọgba tum tum China 2021 ga -akwalite ihe ngosi ahụ n'ụzọ zuru ezu, wuo ihe ngosi usoro mmepụta ihe, nzukọ, asọmpi, arụmọrụ, njem nlegharị anya ọdịbendị na mmepe gburugburu ebe obibi, ma gosipụta ihe okike na uru nke ọgba tum tum.
Ewezuga ịnapụta ọkwọ ụgbọ ala dị ka isi okwu nke ndị knights nke ụbọchị ọrụ nke 920, yana “otuto kpụrụ ọrụ” dị ka isiokwu, ọ bụghị naanị tinye teknụzụ ịntanetị ọgbara ọhụrụ na ngwaahịa ụlọ ọrụ ọdịnala, kamakwa ọ nwere ike kenye, mepụta ụzọ ọhụrụ maka ọrụ. Na -ebugharị site na nkeonwe ruo na iji ọgba tum tum, ntụrụndụ, ọrụ sublimation na mmepe mmekọrịta ọha na ụba na China, Ọ na -eme ka ọnọdụ ọgba tum tum laghachi na ndụ obodo, Ọ na -ekwupụtakwa ike dị mma nke otuto ọrụ, nke natara nlebara anya nke gọọmentị ime obodo. na nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ ịntanetị.
Dị ka ihe ngosi ika nwere mmetụta zuru ụwa ọnụ, ihe ngosi ọgba tum tum China na -anọchite anya ọkwa ụlọ ọrụ ọgba tum tum China ugbu a, na -akwalite mmepe nke ọdịbendị ọgba tum tum China, ma na -eduga ụzọ mmepe nke ụlọ ọrụ ọgba tum tum China. Ọ ga -enye aka na mmepe na -adigide nke ụlọ ọrụ ọgba tum tum China na -eduga ụlọ ọrụ ọgba tum tum ụwa.